Chii chinonzi Mutero Wenzvimbo: Zvinangwa, mutero zvinosungirwa uye mari | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi Mutero Wenzvimbo
Claudi Casals | | General hupfumi, Mitero
Kazhinji tinonzwa nezve Mutero Agency, Treasury, mitero, nezvimwe. Ruzivo rwakashata nezvake runogara rwuchisvika patiri uye runokurudzira kutya mudzimba zhinji muSpain. Izvi imhaka yekuti ndizvo iyo nyika muviri inoona nezve kuunganidza mutero. Kupfupisa muchidimbu kuti chii Mutero Agency: Isangano rinoita kuti isu tibhadhare mutero.
Kunyangwe paine mukurumbira wakashata, iyo Mutero Agency kana Treasure zvakafanira kuchengetedza nyika irambe ichifambira kuitira kuti igone kuramba ichisimukira nekubudirira. Kana iwe uchifarira uyu musoro uye uchida kuzvizivisa iwe pachako nezve ichi chinhu, ini ndinokurudzira kuti iwe uverenge ichi chinyorwa.
1 Zvinangwa zveMutero Agency
2 Mitero yemitero yemakambani uye mahara
3 Chirevo chemari
Zvinangwa zveMutero Agency
Chinangwa chekutanga chemutero system yenyika chero ipi zvayo kutora mitero kuitira kuti igutse zvese zvido zvehuwandu hwakazara. Izvi zvinoitwa kuburikidza nemasevhisi ekutanga enzvimbo dzakasiyana sedzidzo, hutano, chekufambisa, kutaurirana, nezvimwe. Mune mamwe mazwi: iyo mitero inobhadharwa nevagari inoshandira kuchengetedza magariro pamwe nehupfumi hwenyika kuburikidza nemaumbirwo akasiyana ayo anoumba.
Naizvozvo, kune akati wandei zviitiko zvinowira mukati memabasa eiyo Mutero Agency. Tevere tichaona rondedzero yeakanyanya kusarudzika:
Kuongorora, kuunganidza uye manejimendi emitero inoenderana neayo nyika muridzi Izvi zvinosanganisira wega mutero wemari (wega mutero wemari), isiri-mugari wemutero, makambani, chaiwo mutero uye VAT (kukosha kwakawedzera mutero)
Mabasa akasiyana siyana ane chekuita ne Mari yemaguta uye Autonomous Nharaunda.
Unganidzo yeEuropean Union mari pachayo.
Kubatana mukutonga dzimwe mhosva, senge dziya dzine chekuita neHurumende Treasure kana kubiridzira.
Unganidzo yenguva yekuzvidira ye mitengo iri yeHurumende Veruzhinji Chikamu.
Chero zvazvingaitika, pane mitsara miviri yezviito zvakagadziriswa neImitero Agency inoshumira kuzadzisa mutero wemitero yemunhu wega wega kana sangano. Chekutanga pane zvese, ivo vanopa rubatsiro uye neruzivo masevhisi kumutero. Nenzira iyi ivo vanoderedza zvisina kunangana mari. Pane rimwe divi Ivo vanotora akasiyana matanho ekudzora kuti aone chero kutyorwa kwemutero.
Mitero yemitero yemakambani uye mahara
Nhasi, chero hupi hwehupfumi muSpain unofanirwa kubhadhara mutero. Saka, vamiririri vehupfumi, kureva kuti, vanozvishandira uye makambani, vanosungirwa kunyoresa neTax Agency kana vachizotanga chiitiko. Iri registry rinosanganisira kuziviswa kwega kweimwe mitero senge wega mutero wemari, wekambani mutero, VAT uye mimwezve mitero.
Uyewo, Rimwe basa reTax Agency ndeyekutarisa invoicing yemakambani uye ma freelancers padanho remutero. Zviripachena, wega mutero kudzora inosanganisirwa. Ndokureva kuti: Makambani maviri nevasununguka vanofanirwa kubhadhara mutero wese wavanowana mukubhadhara kwavo. Iyo tax Agency inopa ruzivo rwemutero kune vamiriri vehupfumi. Muenzaniso weiyi matemplate matemplate uye nezviri mukati. Inopawo ruzivo nezve dzakasiyana mutero wemunhu mari uye mitero yeVAT, sezvo vaviri ava vaine chakakosha maitiro munzira iyo makambani nevanozvishandira vanotera.
Nzira yakajairika yekubhadhara mitero nemugari kana muteresi ndeyekutaura chirevo chemari. Naizvozvo, zvakakosha kwazvo kuti uzive magwaro anodikanwa anofanirwa kuendeswa kune Mutero Agency. Zvakare, zvinobatsira kuziva izvo zvinogona kubviswa uye chii chiri pasi pekutorerwa. Kune zvakare mikana yekubhadhara yekudzosera iyo iyo muteresi yaanogona kutora mukana nayo zvichienderana nemamiriro ezvinhu. Hatifanire kukanganwa kuti pane imwe nguva yekupedzisa maitiro aya atinofanira kutevedzera kana tisingade kuva nematambudziko.
Neraki isu ikozvino tave nekufambira mberi kwakawanda kwetekinoroji iyo inofambisa, pakati pezvimwe zvinhu, manejimendi uye manejimendi eaya ese emahofisi maitiro ane chekuita nemitero inosungirwa. Iyo dhijitari zera rinounza yakawanda yekubatsira uye yakawanda kuwana kune ese ari maviri ruzivo uye manejimendi eese maitiro. Kunyangwe iyo Mutero Agency yatora mukana weichi kufambira mberi, ichiisa mukushandira inowirirana chikuva. Iyi portal inopa ruzivo rwese nezve maitirwo anofanira kuitwa uye kuti anofanirwa kuitwa sei. Tinogona kuiwana pane yepamutemo webhusaiti yeiyo Mutero Agency.
Ndeupi mubairo wezita uye mubairo chaiwo
Rumwe rubatsiro rwatinopihwa nesangano iri kubva pawebhusaiti yaro yepamhepo ishe yekuwana mhinduro yekusahadzika. Ikoko vanopindura mibvunzo yese ine chekuita nekubhadhara mutero. Izvi zvinorerutsa zvakanyanya mamwe maitiro angaratidzika kunge akaomarara nekuda kwekushaikwa kweruzivo. Uye zvakare, ivo vanopa iwo sarudzo yekuita musangano wepamberi kuti ugone kuisa chirevo chemari.
Ndinovimba ichi chinyorwa chakabatsira iwe kuti uone kuti chii Mutero Agency.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Mitero » Chii chinonzi Mutero Wenzvimbo
Ndeapi makirasi ekungoita
Chii chinonzi chikamu chepamusoro